Imibhobho yeKholamu yePC enePatent Power Lock Locker
Umbhobho wekholamu Isifinyezo soFakelo Jonga uluhlu Khuphela ikhathalogu
Ukuzisa imibhobho yekholamu
Imibhobho yeekholamu yeyona mibhobho iphambili yokuhambisa emanzini. Zisetyenziselwa ukuxhoma impompo engena ngaphakathi equleni kwaye ihambise amanzi ampontshisiweyo kumphezulu ukuze asetyenziswe. Akufuneki ukuba, iipayipi zekholamu zibaluleke kakhulu kwiprojekthi yamanzi / yokuhamba.
Ukugxininiswa kwimishini kwinkqubo yemibhobho yamanzi, imibhobho yekholamu kufuneka ikhethwe ngononophelo. Kufuneka zihlale zomelele, zihlala ixesha elide kwaye zifuna ubuncinci kungabikho kulondolozwa. Impendulo ilele ngaphakathi Imibhobho yeColumn yeVinyl uPVC
Kutheni ukuhlala ixesha elide kubalulekile?
Ewe, imibhobho yekholamu ithatha umthwalo kuyo yonke inkqubo equka: imibhobho, iimpompo kunye neemoto kunye nentambo, kunye nobunzima bamanzi agqitha kwimibhobho.
Bathwala uxinzelelo lwamanzi ngelixa besebenza kunye nesando samanzi ngelixa beqala kwaye bevala iimpompo. Kuya kufuneka banyamezele i-torque kunye nejezi eziveliswa ziimpompo.
Imibhobho emibini yeekholamu zeVinyl nge
Ukuqulunqwa okukhethekileyo kwePCU Column Pipe
Yintoni eyenza imibhobho yeVinyl yeKholamu yeyona Mate ibalaseleyo kwiimpompo zakho zangaphantsi?
Ukuxhathisa ukubola kwe-100%: Akukho Rust = Amanzi acocekileyo
0 Ixabiso lokugcina zero: Akukho mhlwa. Akukho zokwaleka kuyafuneka
Ukuqina okuphezulu kwe-5x: Amandla aphezulu okuqina abenza bomelele kwaye bathembeke
I-60% eyiNdleko-eyi-60% ngexabiso eliphantsi kuneyintsimbi okanye imibhobho yentsimbi.
I-1/6 Ubunzima bentsimbi okanye imibhobho yentsimbi: Ubunzima obulula kakhulu bokwenza ukufakwa ngokulula, ukuthuthwa, ukuphatha kunye nokutshintsha.
Gcina ama-23% oMbane. Yenza ukuhamba ngokulula kwamanzi, kufuna ukusetyenziswa kwamandla okuncinci.
I-100% yasimahla ekuvuzeni: I-Powerlock eneLungelo elilodwa lomenzi iqinisekisa ukuba iipesenti ezingama-100 zivuza umbhobho kunye nekholamu yokungqina komthwalo.
Ixabiso eliphezulu: Inokuphinda isebenze ngexabiso elonyuka ngexabiso le-7%
Imibhobho yekholamu yeVinyl uPVC inokwakheka kwe:
● Polyvinyl chloride: Yenziwe nge-Polyvinyl Chloride engacwangciswanga zilula kodwa zinzima.
● Ukusebenza ngokucacileyo Iiparameter: Ukugcina ukusebenza ngokukuko engqondweni, le mibhobho ilungisiwe ngeCarbide ecatshulweyo yesixhobo se-screw. Bakwenziwe ukuba bangene kwi-Annealing ukuqinisekisa ukuhlala kwemibhobho ixesha elide.
● Ukuyila okuguqukayo: Le mibhobho yenziwe ngokukodwa ukulungiselela ukumelana noxinzelelo oluphezulu. Ziye zaqina ngenxa yokulungelelanisa kubunzulu obukhulu.
● Uqine High: Ukuthwala uxinzelelo oluphezulu kuxinzelelo, le mibhobho yamanzi inamandla amakhulu kunye nomthamo womthwalo. Banamandla aphezulu oomatshini.
● Iqhenqa kwaye ilula: Iinxalenye ezomeleleyo nezibhityileyo zemibhobho yeVinyl ziphuhlisiwe ngendlela yokufumana i-torque epheleleyo evelisiweyo ngenxa yemoto ekhokelela kubomi obude.
● Kukhuselekile kwaye kufanelekile kubunzulu obukhulu: Ezi Imibhobho yePVC Vinyl Column ziyilelwe ubunzulu ukuya kuthi ga kwi-1400 ft.
Impompo yoLondolozo lwentsimbi- 304 Flange
Impompo yoLondolozo lweSinyithi esincinci
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo - 304 iiadaptha eziphezulu
I-Adapta ephezulu yentsimbi ethambileyo
I-Cast Irom Iadaptha eziPhezulu
Iintonga zeSinyithi ezingenasici zisetyenziswa kuPomp Guard
Bomelele nge-200% kunemibhobho yentsimbi. Imibhobho ye-uPVC yenziwa ngokufanelekileyo ukuyenza ikhaphukhaphu ubunzima ngaphandle kokuyekethisa kumandla ayimfuneko.
Olona qheliselo luhle
Imibhobho yekholamu evela kwiVinyl ine-friction ephantsi eyenza ukuba ifumane amanzi amaninzi. Emva kwexesha elithile lokusetyenziswa, imibhobho yentsimbi ithande ukufumana umhlwa kwaye ekugqibeleni umgangatho wokuthotywa kwamanzi. Kuba awukho umba wokudamba okanye umhlwa kwiiVinyl Column Imibhobho, umgangatho wamanzi uhlala ulungile.
Ukuphatha nokuGcina iziKhokelo:
Iziphumo zobushushu kwaye ngaba umlilo wePV ukhuselekile?
Zithini izibonelelo zemibhobho ye-uPVC?
Khetha imibhobho yekholamu yePVC yeeProjekthi zoLawulo lwaManzi zeKamva laManzi